HPL / High chakatsindirwa laminate jira - China Weifang Joy Sea Trade
.Import ruvara mapepa 100% phenolic nebwe Mukuru kumanikidzwa laminate jira achagara kushumira iwe yepamusoro zvigadzirwa.
chigadzirwa HPL / High chakatsindirwa laminate papepa
zvinhu Phenolic nebwe + kraft bepa
zera 1220mm * 1830mm (4 '* 6')
1220mm * 2440mm (4 '* 8') - Normal saizi
ruvara huni zviyo ruvara. chakasimba ruvara.
kunyoresa HPL vane yepamusoro kushongedzwa zvokuvakisa, izvo zvikuru kureva chimbudzi partition, hofisi partition, fenicha, kicheni cabinet, kabati, countertop, hwindo, musuo ganda, rusvingo lining, sirin'i, tenga kukodzera, shelving, etc.
Apex Wakaputirwa ne emapuranga pallets kana maererano chaiwo zvinodiwa vatengi '.
1.Resistant pamoto, kupisa, mvura, anokwenya; Anti-kunofambira mberi, soundproof
2.Durable, kwete nyore deform kana anowa
3.Environmental kudzivirirwa, hapana chepfu kana tichiratidza fuma yakabuda
4.Can iminame, pakusika streamlined aesthetic.
5.Easy uye zvakakunakira kugadzira uye urongwa
6.Varieties ruvara uye pamusoro okugadziridza zvinogona kusarudzwa, kugutsa favorite yenyu.
7.Easy kuchenesa, ivo echitema zvinogona kucheneswa kuburikidza nyoro jira.
8.Favorable mutengo, ane yemakwikwi zvinobatsira kuenzanisa nevamwe dzakawanda nembiri muchiso.
1.Import ruvara mapepa 100% phenolic nebwe Mukuru kumanikidzwa laminate jira achagara kushumira iwe yepamusoro zvigadzirwa.
2.Finishied inotumirwa impregnating ari decoration bepa iri melamine uye kraft bepa iri phenolic, vachiyanikira uye yakakwirira tembiricha uye kumanikidzwa;
3.Outstanding kuramba abrasion, mukuru tempreature, tsvina kunotyisa, mudzanga kuvesa, uye akazaruka rimi, vanopfeka nemishonga, moto nemishonga, Anti-kunofambira mberi, kemikari nemishonga;
4.Decorative pamusoro mashoko zvose indoor uye panze kushandiswa, zvinowanzoshandiswa pamusoro kushongedzwa dzimba, mahofisi, nezvikamu, partitions, dzekubikira, sideboards, fenicha uye tafura rabhoritari misoro;
5.Easy kuchenesa, Easy kubviswa, nyore kuva unopinza-akafukidza muchina, Healthiness uye zvakatipoteredza kudzivirira
7. Ipa wakasununguka mbirikira zvokuvakisa vatengi 'vanozivikanwa kudhinda uye kukwidziridzwa.
Next: Mabhuku eBraille Hardboard
High Density PARTICIPLE Board
High Pressure Laminate ukomba
Hpl Interior shongedza
Laminated PARTICIPLE Board
Melamine Faced PARTICIPLE Board
Melamine Laminated PARTICIPLE Board
Melamine PARTICIPLE Board
Melamine PARTICIPLE Board / Pb
HPL Laminated Plywood kuna USA / 1220x2440mm Formic ...